China Enwusi Ìhè China Manufacturers & Suppliers & Factory
Enwusi Ìhè - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Enwusi Ìhè)
2x4 35W Ejiri Mgbaju Anya Fixtures 5000K
Ihe ọkụkụ 2x4 ahụ 35W nwere 4,550 lumens na ọnụ ntụ nke 120 degrees. Nke a na-eme ka ihe ọkụkụ na-egbu ọkụ nwere ike dochie anya ọkụ ọ bụla dị na 2x4ft. Ihe omimi a na-emighị emetụ na-adị mfe maka ụlọ elu na obere ohere maka ụlọ. Ebube anyị 2x4 na-agba ọsọ bụ DLC nke a na-edepụta na ETL edepụtara. A nke oge a ụkpụrụ...
Enwusi Ìhè 1x4 Na-enwusi Ìhè Osimiri Ìhè Costco Ìhè Ejiri Ìhè 200W Sdatium Ìhè 12x12 Ejiri Ìhè Elu Bay nwere Pizza Ìhè